प्रहरीले मात्र चाहेर शान्ति सुरक्षा कायम हुन सक्दैनः प्रहरी निरीक्षक साउद – हाम्रो समाधान
प्रहरीले मात्र चाहेर शान्ति सुरक्षा कायम हुन सक्दैनः प्रहरी निरीक्षक साउद
समाधान अन्तरबार्ता / २७ असोज
नजिकिँदै चाडपर्वहरु स्थिति भयावह कोरोनाले सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको भजनी नगरपालिका क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीले मात्र चाहेर शान्ति सुरक्षा कायम नहुने इलाका प्रहरी कार्यालय भजनीमा सरुवा भई आएका प्रहरी निरीक्षक तथा कार्यालय प्रमुख नरबहादुर साउँदले स्थानीय नागरिक अगुवाहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहने बताएका छन् । उनले इलाका प्रहरी कार्यालय भजनी मातहतमा करिब १ लाख जनसंख्या रहेको बताउँदै एकजना प्रहरीको भागमा १ हजार २ सयदेखि १ हजार ३ सय नागरिकहरु पर्न जाने भएको हुँदा प्रहरीले मात्र चाहेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकिने बताएका छन् । यस दैनिकका ब्यूरो प्रमुख अर्जुन खत्रीले प्रहरी निरीक्षक एवम् कार्यालय प्रमुख साउँदसँग भजनी क्षेत्रको हालको अवस्था र आगामी रणनैतिक योजनाका बारेमा गरेको कुराकानीको सार संक्षेपः
–भजनी इलाका प्रहरी प्रमुखको रुपमा आउनुभएको छ । शान्ति सुरक्षालाई कसरी मजबुत बनाउनु हुन्छ ?
भजनीको सम्बन्धमा यहाँ निरीक्षण गर्ने काम जनप्रतिनिधि, समाजसेवी बुद्धिजीवि, राजनीतिक दल, पत्रकार, चेतनशिल नागरिक लगायतसँग छलफल तथा परिचयरात्मक कार्यक्रम यस ठाउँको बारेमा जानकारी लिने काम भएको छ । उहाँहरुले दिनुभएको सुझाव सल्लाहलाई आत्मसात गर्दै शान्ति सुरक्षामा थप प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने प्रयत्न गर्नेछु ।
–चाडपर्व नजिकै गर्दा झैंझगडा हुने चोरी तस्करीका घटना बढी हुने गर्दछन् । यसको नियन्त्रणका लागि तपाइँको योजना के छ ?
दशैं तिहार भनेको हिन्दूहरुको माहान् चाड पर्वको रुपमा मानिन्छ । सुरक्षाको कुरा गर्दा भजनीको जनताको अनुपातलाई हेर्ने हो भने हामीसंँग प्राप्त जनशक्ति नहुन सक्छ । त्यही पनि एउटा म्यानेजरले त्यही जनशक्तिलाई उपयुक्त ढंगले परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सके कुनै पनि अप्रिय घटनाहरु नघटने, पहिला हुने घटनाहरु पनि निराकरण गर्न सुरक्षित योजनाको हिसाबले म तयार रहने छु ।
साथै त्यसमा आमस्थानीय नागरिकहरु पनि सचेत हुन आवश्यक छ । सबै कुरा प्रहरीले गर्छ भने हाम्रो मिसन सफल नहुन सक्छ । आम नागरिकहरुले पनि बिना बर्दीको प्रहरीको रुपमा सजक हुनु पर्छ ।
–भजनी इलाका प्रहरी कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति के छ ?
इलाका प्रहरी कार्यालय भजनीमा जनशक्तिको कुरा गर्ने हो भने ३० जना मात्र छन् । तर, पनि यी ३० जनालाई प्राप्त हुने गरी व्यवस्थापन गर्छाै । भजनी नगरपालिकाको जनताको अनुपात हेर्दा हाराहारी १ लाख जनता छन् । यी १ लाख जनतालाई शान्ति सुरक्षा, उपराध हुनबाट बचाउने शिलसिलामा १ हजार २ सयदेखि १ हजार ३ सय जनताको अनुपातमा १ जना प्रहरीले कार्यक्रममा पालना गर्नुपर्ने चुनौती छ । खासमा भन्नुपर्दा भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड भनेको २ सयजनाको अनुपातमा १ जना सुरक्षाकर्मी हुनुपर्छ । त्यो हिसाबले हामीसँंग न्यून जनशक्ति हो । अब यही न्यून जनशक्तिलाई पनि उचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सके प्रभावकारी नै हुन्छ ।
–विश्वभर कोरोना माहामारी फैलिरहेको समयमा भजनी पनि अछुतो रहन सकेको छैन । भजनीमा कोरोना भाइरसलाई यहाँका जनताहरुले सामान्य नजरले हेरेको अवस्था छ । यो चाडपर्वको समयमा झनै भीडभाड हुने भएकोले प्रहरीले कस्तो योजना बनाएको छ ?
म यही असोज १४ गते आइसकेपश्चात् नगरपालिकाको इमर्जेन्सी बैठकमा सहभागी भएको थिए । यसलाई रोगथाम कसरी गर्ने भने कुरा सबैका लागि महत्वपूर्ण छ । नेपाल प्रहरी, इलाका प्रहरी कार्यालय भजनीले मात्र रोकथाम गर्ने प्रयास भनेको असम्भव प्रयास हो । यसका लागि स्थानीय निकाय, युवा क्लब, जनतासँंग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले सहकार्य गरी जनतालाई जनहितमा जारी सन्देशहरु दिने, अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर नजाउ, जानै परे मास्कको दैनिक प्रयोग गर्ने, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने बानीको विकास गरौ । सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, भीडभाड नगर्नेजस्ता कुराहरुमा जनतालाई जानकारी दिने र जागरुप बनाउने । सामाजिक दुरी कामय गरेर कार्यक्रमको आयोजना गर्ने त्यो पनि सम्भव भएन भने मिडियाको सहायताले यी कुराहरु प्रकाशन, प्रशारण गर्न लगाए केही हद–सम्म नियन्त्रण गर्न सकिएला भने अपेक्षा गरेको छु ।
–तपाईं एउटा इप्रकाको प्रमुखको रुपमा आइसके पश्चात् म चाहिँ यस्तो काम गरेर जान्छु जो उदाहरणीय बन्ने छ भन्ने केही कुरा छ ?
अब नेपाल प्रहरीको मूल उद्देश्य भनेको अपराध रोकथाम नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नु नै हो । जहाँ गए पनि जुनसुकै इप्रकामा गए पनि मेरो अधिकार क्षेत्रमा यी नै कुरा पर्ने हो । हाम्रो सेवाग्राही भनेको पीडित व्यक्ति हो । हामी ठाउँ आउने सामान्य नागरिक हुन सक्छ अन्य हुन सक्छ । मुख्यतया पीडित भएर आउने व्यक्तिलाई हामी न्याय प्रदान गर्ने समयमा हामीले एउटा नेपाल प्रहरी भएको हुनाले हामीले कानुनको कार्यान्वयन गराउने, कानुनको परिधिभित्र रहेर हाम्रा कार्य सम्पादन गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउ हुनेसम्मको रोल खेल्ने छु । र, काम गर्ने शिलसिलामा जुन मैले लगाएको पोशाक छ । त्यसको बदनाम हुने । भरखरै मात्र नेपाल प्रहरीले प्रहरी कर्मचारीका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । मैले युलाई आफ्नो मूलमन्त्र सम्झेर आचरणमा लिएर पकै पनि यसक्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा दिने विषयमा आफूले जाने बुझे–सम्मको काम गर्नेछु ।
–अहिले पनि भजनी नगरपालिकामा चोरी तस्करी घटना बढदै गएका छन् । यसलाई रोक्न न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न प्रहरीले खासै भूमिका खेलेको देखिदैन त ?
इलाका प्रहरी कार्यालयमा भएको जनशक्तिलाई पैदल गस्ती, मोवाईल हर्चाेर गस्ती मोटरसाईकलमा पढाउने गरेका छौ । सिभिलमा ड्युटी छ हामीसंँग । अब चोरी तस्करीलाई रोक्न, न्युनिकरण गर्न गाउँघरमा गस्तीको माध्यम द्वारा, गस्ती गएको समयमा टोल बासीलाई भैरहेको चोरी तस्करीको बारेमा छलफल गर्ने सल्लाह सुझाव दिने र जागरुप गराउने कुरा गर्दै आएका छौं भने केही त्यस्ता ब्यक्तिलाई हामीले नियन्त्रणमा समेत लगिसकेका छौं ।
–भजनी नगरपालिका भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको क्षेत्र हो । जहाँ भन्सार छलेर सामाग्रीहरू ल्याउने क्रियाकलाप बढी नै छ । यसको व्यवस्थापन गर्नमा के छ केही गर्न सकिन्छ ?
मुख्यतया भन्सार छली वा छल्ने उद्देश्यले हाम्रो नेपालबाट केही वस्तु भारत जाने र भारत –बाट केही वस्तु नेपाल आउने भन्ने कुरा जुन छ, यस सन्दर्भमा सुरक्षा तथा निगरानीका लागि नेपाल सशस्त्र बल, प्रहरी चौकी, भन्सार कार्यालय, वडा कार्यालय छ । यी सबैले एक खालको जागरुपता देखाएर, क्रियाशिल भएर रोकथामको लागि प्रयास गरेमा राम्रो हुन जान्छ । उहाँहरुसंँग हामी पनि जोडिएका छौं । उहाँहरुले हामीलाई सहयोग गरी सूचना आदान–प्रदान गरेमा पक्कै पनि केही हदसम्म न्युनिकरण हुन्छ । यी कुरा कुनै नौलो विषय पनि हैन पुराना हुन् । यसमा सबैको साथ चाहिन्छ ।
लेखापढीको आठौ बार्षिक साध...
PrevPreviousबामदेव गौतमद्वारा ट्राफिक बिटको उद्घाटन
Nextअन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवस समपन्नNext